Maalinta Dhawrista Dunida - Waqtigeeda Wakhti U Qaadi Karin
Maalinta Taageerada Dunida - Waxaan la kulmay caruurnimad la socota beerta, iyo mid ka mid ah waxyaalaha ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay in la arko marka la ogaado sida loo kaxeynayo tareenka waa habka loo raro. Maalmo dhowr ah ayaan ku dhaartaa waxay u muuqataa in aad hoos u sii socoto wax ka sii badan. Waxaan dareemayaa in wadada hadda iyo mar labaad, sidoo kale.
Dunida tiknoolajiyadeed, hoos u soco, markaad ka sameysid faylka ama faylashaada, waa wax muhiim ah. Fursad ka dhigaysa in xogtu ay muhiim u tahay shaqadaada, waxa aad u isticmaali kartaa inaad si joogta ah u maal-galiso. Xaaladdaas, haddii ay jirto xaalad niyad-xumo ah oo natiijada ka dhalatay xogta nasiib darada, waxaad asal ahaan ka soo kabaneysaa xogtaada ugu dambeyntii. Waxay noqon kartaa nolol.
Tani waa sababta ay muhiim u tahay in la dareemo dhammaan waddooyinka degdega ah March 31, Maalinta Taageerada Adduunka.
Waxay u egtahay mid ku filan aasaasiga, laakiin weli hoos udhaca xogtaadu waxay noqon kartaa mid qaali ah oo jilicsan. Inkasta oo DVD-yada xogta ay si cad u muuqdaan, xawaaraha qulqulka badani way qaali karaan inkastoo xaqiiqda ah inay ka qaalisan yihiin shan sano ka hor. Nasiib wanaag, waxay u muuqataa sida alaabta caydhinta ah ee ku-meel-gaadhka ahi inay si joogto ah u socdaan si macquul ah. Haddii ay dhacdo inaad u baahan tahay booqashada nuqul, ka dibna waxaad u baahan doontaa awood badan. Iyada oo ku xiran qiyaasta xogta aad soo iibsatay, waxay u qalantaa in la ogaado fadhiga gurmadka inuu qaadan karo waqti.
Si kastaba ha ahaatee, hadda wax kasta oo dhibco ah Maalinta Dayactirka Adduunka ayaa ku wareegsan, waxaan ku dadaalayaa inaan xajiyo mid kasta oo ka mid ah xiriirada, farriimaha, sannadka tweets, iyo dhammaan xogahayga kale ee akhristayaasha. Waxaan tagay Maalinta Dayactirka Adduunka afar sano ka hor intaanay ganacsiga ka soo iibsanayn Twitter. Laga soo bilaabo marka hore, waxaan u xaqiijiyey in nuquladayda ay ka duwan tahay dabeecadda oo aan la macaamilin maskaxda ku haynta "maalgashadaydii oo dhan waxay ku tiirsaneyd hal meel." Xaalad maskaxeed ayaa hubaal ka dhigaysa arimaha khuseeya adiga.
Sidoo kale marka aad eegto digniintaada qiiqa iyo bedelida beteriyada mar kasta oo ay dhacdo Daylight Savings dhacdo, waxaan isku dejiyey waqti go'an inaan dhacdadayda sannadka ah ee aan ku dhicin ee aan la diideyn maalinta World Backup Day. Waxaan xitaa u dhigay sidii munaasabadda maalinta oo dhan ee My Logbook My. Tani waxay leedahay faa'iido dheeraad ah oo ah in dadka laga ilaaliyo inay i soo dhoweeyaan kulanno!
Iyada oo ay tahay mid muhiim ah sida xogta shaqo-gashiga, waxaan sidoo kale ka dhigi doonaa heshiis aan la socdo xogtayda, iyo sidoo kale. Gigabaytka diiwaanka shakhsiyadeed ayaa sidoo kale la mid ah sida sawirrada qoyska, sawirada guriga, qoraallada qoraalka ah, farriimaha, iyo xNUMXs-remix mp80s ayaa intaa sii dheer si buuxda u fahmeysa datarka xogta dushooda, daroogada, iyo dariiq adag.
Xaqiiqdii waa la ogsoon yahay, guud ahaan waan ku faraxsanahay in aan ka faa'iideysanayo nuqullo badan. Inaad noqotid macmiil macmiil, kootaroolka ayaa si sahlan u fududeeyay, imikana daruurtu waxay sameysey nuqul ah taas oo aad u yar. Laga soo bilaabo baajinta aan la qorsheynin in la naqshadeeyo ama aan loo eegin suurtagalnimada in aan u baahanahay xog yar oo ka timid wakhtigii hore, waan ku soo kaban karaa xogtayda si hubaal ah. Waa mid ka mid ah labadii sano ee ugu dambeeyey ee nolosha; Waa ku tiirsanaan aniga aniga.
Ka hadlida duruusta, Maalinta Taageerada Dunida ayaa ah fursad ay ku ammaanaan shakhsiyaadka lagu xilsaaray dib u soo kabashada ururadaada. Sameynta qorshe dib-u-hagaajineed oo wax ku ool ah waa wax xun ama fudud. Hawlaha la qabsaday ee ururkaaga waxay ku xiran tahay nuqul awood leh iyo dib-u-bogsiin, sidaas awgeed aragtida maanta waa mid aad u badan oo ku saabsan habka loo dhaqaajinayo xogta maaddaama ay u arkaan shakhsiyaadka naga caawiya marka fiiso-xogeedku soo baxo.
Marka bisha Maarso 31 ama maalinta ugu dambeysa ee bil kasta, ku dadaal inaad hoos u dhigto diiwaanadaada. Sidoo kale waxaad qaadan kartaa Dayactirka Maalinta Taageerada Dunida adiga oo kor u qaadaya gacantaada saxda ah iyo dib u dhiska, "Aniga [sheeg magacaaga] si ballaaran u ballan qaad inaad u dhaqaaqdo dukumintiyadii muhiimka ahaa iyo xusuusintii muhiimka ahaa ee March 31st."
Solution Technologies Innovative waxay ku weydiinayaan inaad maskaxda ku hayso inaad adigu iska xejineyso, barayso dadka aad jeceshahay ee ku saabsan Maalinta Taageerida Adduunka sidoo kale in ay ka iftiimiso xaqiiqda ah in saaxiibbadaa aysan sii deyn saaxiibo aan lahayn dib u gurasho.
Sida Loo Isticmaalayo Linux ee Azure, Qaybta I: Aasaaska
Sida loo Hagaajiyo Kooxda Mashruuca Guusha Isticmaalka Tababaraha Mashruuca